Archive du 20190723
Fikambanana ASTAFIM “Governemantan’ny fampihavanam-pirenena no tokony hatsangana”
Naneho ny heviny mikasika ny governemanta tokony hitsangana eto amin’ny firenena Atoa Ramamonjisoa Fulgence, filohan’ny fikambanana mpanao asa soa ASTAFIM omaly.
« Groupement Parlementaire uni pour la Republique » Tsy mametraka olana amin’ny fanendrena ny praiminisitra
Ny filohampirenena no nifidy sy nametraka ny praiminisitra Ntsay Christian ary mbola nametrahany fitokisana, matoa mbola naveriny tamin’ny toerany.
Taratasin’i Jean Alefa indray ary e !
Tsy maninona fa raketo indray ary aloha ry Jean a ! Alefa indray ary e ! Hitako ohatry ny mba efa miakatrakatra indray mantsy.
Samy manana ny manahirana azy !
Nahazo filoham-pirenena vaovao isika tamin’ity taona ity, nahazo solombavambahoaka, nanana governemanta misy minisitra maro ary hitsangana tsy ho ela indray ny governemanta vaovao, hahazo ben’ny tanàna,…
Asan-jiolahy efa voaomana Raikitra ny “opération” tobin-tsolika
Sesilany indray ny fanafihana toby mpaninjara solika tato ho ato. Jiolahy miisa 4 tsy nisaron-tava nirongo basy no nanafika ny Shell teny Ankadindramamy eo amin’ny Vatosoa omaly alatsinainy 22 jolay maraina tokony ho tamin’ny 6 ora sasany.
Polisy vao nivoaka Hanome ra hanampiana ireo marary mila fandidiana maika
Hafa dia hafa ny fihetsika hasehon’ireo mpianatra ho polisy vao nivoaka ny zoma lasa teo miisa 1.098 mirahalahy. Mialoha ny handraisan’izy ireo ny tena asany mantsy dia hanome ra
Colonie de vacances Miteraka olana ny fialantsasatra tsy mitovy
Ny tontolo iainana, ny fanabeazana ary ny fiarahamonina no tanjona telo napetraky ny CEMEAM, izay fikambanana mikarakara hetsika fialantsasatra iombonana (colonie de vacances).
Fitrandrahana ny farihin’i Tritriva Lehilahy iray tsy nahazo alalana no tratra
Lehilahy iray izay tsy nahazo alalana akory avy amin’ny minisiteran’ny tontolo iainana, efa nitrandraka ny farihin’i Tritriva ao Antsirabe nandritra ny fotoana maro no tratra ka nampiatoana tamin’izany.
Instat Madagasikara Antontan'isa tamin'ny 2012 no mbola ampiasaina
Mbola antontanisa tamin'ny taona 2012 no ampiasain'ny INSTAT amin'izao fotoana izao hijerena ny faripiainan'ireo tokantrano Malagasy.
Arina fandrehitra eto Antananarivo Niakatra 50% ny vidiny
Nahitana fiakarany 50% ny vidin'ny arina fandrehitra eto an-drenivohitra tato anatin’ny 2 volana. Tafakatra 23 000 ka hatramin’ny 30 000 Ariary ny vidiny amin’izao fotoana raha manodidina ny 17 000 ka hatramin’ny 20 000 Ar teo aloha.
Zazavavy 14 taona bevohoka tsy fidiny Efa eny Antanimora ilay raim-pianakaviana nanolana azy
«Bevohoka ilay zazavavy 14 taona, naiditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora ilay mpanolana». Io no vaovao ofisialin’ny mpitandro filaminana mahakasika ny fanolanana nitranga tao Manjakandriana.
Lozam-pifamoivoizana teny Talatamaty Zazakely roa taona maty tsy tra-drano voahitsaky ny fiarabe
Fiara lehibe iray no nanitsaka zazavavy kely roa taona teo amin’ny lalam-pirenena fahefatra, PK 11 + 800 ny 18 jolay sahabo ho tamin’ny 11 ora sy sasany raha ny fampitam-baovaon’ny zandarimariam-pirenena eo Ankadilalana.
Seranan-tsambon’i Mahajanga Tra-tehaka ny rongony 16,5 kg saika alefa any Kaomoro
Tanora kaomorianina mpandranto fianarana no tra-tehaky ny mpitandro filaminana tamin’ny fikasana hanao trafikana zavamahadomelina vokatra eto Madagasikara hamatsiany ny olompirenena any amin’izy ireo.
Mpitandro filaminana Mitohy ny ezaka midina ifotony
Mitohy ny fanatonan’ny tafika Malagasy ny mponina ho fampandriana ny fahalemana na an-dalam-piovana aza ny governemanta.